Wararka - Sidee loo doortaa xalka madaxa meelaynta habboon ee mashiinnada meelaynta sare ee SMT?
Markay shirkaduhu doortaan mashiinnada meelaynta horumarsan, saddexda shuruudood ee aasaasiga ahi waa saxsanaanta meelaynta sare, xawaaraha meelaynta degdegga ah, iyo xasilloonida sare si loo hubiyo meelaynta xawaaraha sare iyadoo lala kulmayo saxnaanta meelaynta qayb yar.
Si loo gaaro saameynta la rabay, qorshe madax meelayn ku habboon (madaxa shaqada) ayaa si gaar ah muhiim u ah. Kaliya marka qorshuhu sax yahay ayay howsha meelayntu noqon kartaa mid waxtar badan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira xalal madax-meeleyn badan oo caadi ah: madax go'an oo madax ah, madax badan oo go'an, madax wareeg ah iyo madax badan oo wareegaya. Si fudud haddii loo dhigo, dhab ahaantii waa iskudhaf iskutallaab ah hababka dhaqdhaqaaqa iyo tirada madaxyada meelaynta.
Habka dhaqdhaqaaqa 1: dhaqdhaqaaqa toosan
Xalkani wuxuu sameyn karaa oo kaliya dhaqdhaqaaq toosan, badiyaa iyadoo la adeegsanayo gacan ama qalab bir ah si loo xakameeyo mootada si loo kordhiyo cabbirka dhaqdhaqaaqa, taas oo ah xulasho kharash-ku-ool ah
Farqiga u dhexeeya madaxa badan iyo madaxa kaliya waa in la kordhiyo culeyska shaqada halkii cutub iyadoo la kordhinayo tirada meeleynta si loo gaaro ujeedada ah hagaajinta waxtarka.
Habka dhaqdhaqaaqa 2: xariiq toosan + wareeg
Xalkani wuxuu sameyn karaa dhaqdhaqaaq toosan iyo dhaqaaq wareeg ah isla waqtigaas, wuxuuna isbedel weyn ku sameyn karaa dhidibka Z. Xaaladda isla tirada madaxyada meelaynta, way ka badbaadin badan tahay xalka go'an, miisaanka ka fudud, xawaaraha ka hooseeya, iyo saxsanaanta ka sarraysa. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay istaroog Gaaban, culeys hooseeya, xaalado codsi sax ah oo sarreeya.
Marka loo eego baaxadda weyn ee "xariiqda toosan + wareegga", farqiga u dhexeeya hal madax iyo madax badan ayaa la mid ah xalka go'an. Waxay umuuqataa inay kaliya kordhinayso tirada meeleynta madax, laakiin waxay sidoo kale kordhisaa culeyska guud iyo mugga qalabka. Meelayno badan Madaxa ayaa isla shaqeynaya isla waqtigaas.
Xalalka kaladuwan waxay leeyihiin awooddooda u gaarka ah, shirkaduhuna waxay u baahan yihiin inay doortaan xalka ugu habboon ee ku saleysan xaaladaha dhabta ah. Si buuxda uga fikir dhinacyada kala duwan sida qiimaha, saxsanaanta, xawaaraha, xasiloonida, iwm, oo xulo xalka ugu fiican ee hadda jira. Adiga kuugu fiican ayaa ugu fiican!